Adamin Eva by Sanjay Bajaj 231 views
I Believe by Sanjay Bajaj 492 views
1. (Manage to the Customer’s Expectation) By Myat Ko Oo Manager OA sectionဖောက်သ ည်မော်င် ခက် မျာားက်ို စီမံ ခန့်ခခွဲ ခ်ျား
2.ဖောက်သ ည် ဝန်ေ ဆ်ာမှုမာ ထျားခခ န်ွဲ အဆ်ရောက် ရသျာားတွဲ အခဖွဲ့အစည်ျား တစခုအေနန်ဖောက်သ ည်မော်င် ခက် (customer expectation)မျေားခခန်ျား က်ို စတ်ုင်ယ်မာ ဖစ်ယ်။ က်နဦျား အဆ် မျာားမာဖောက်သ ည်ေ မ်ာင် ခက် က်ို က်ိုင်ယ်တာသငယ်ူပါတယ်။
3.ဖောက်သ ည်ဝန်ေ ဆ်ာမှုမာ ထျားခခ နမှုရအော်ဆောင်က်ေ နတွဲ က်ိုမ္ပဏီတစခု အသတက် ယ်ျားက်ဖောက်သ ညမျာားရွဲ့မော်င် ခက်မျာား၊မော်မန်ျားခက်မျာားက်ို သငယ်ယ်ွ ယ်န်ကေ်ာ်ဖတ်နိုွမ် မညွု့ ထ်မရတ်ျာားတယ်။ိုပေ့မွဲ ယ်ျားက်ိုမ္ပဏီ က် ဝန်ေ ဆ်ာမှုဘက်မရာ အဆ် မ်နေရာ က်ို စဉ်ဆက်မြ ပတ် ရရငာတွဲ အခါမာေ တာဖောက်သ ည်ွဲ့မော်င် ခက်ုစီမံသက်ပ်ွဲရတာ အမျာားကြ်ျီားက်ို ပိုခက်ခွဲငာေ ကြ်ာ်ျားသေတ့ရတယ်။ ဘာေ ကြ်ာ် ဆိုေ တာဖောက်သ ည်ွဲ့မော်င် ခက်ေ သတက် မလငွဲမေသ ကြ်ျီားသထျာားငာပျြီား ယ်ျားေ မ်ာင် ခက်ြ က်ျီား သထျာားငာတာန် အမ ဝန်ေ ဆ်ာမှုအဆ်သေတက် နမ် က်ငာမယ်ွု့ မ်ွာရတယ်။
4.ဖောက်သ ည်ွဲမေ့ာ်င် ခက်ေ သတက်ို ထထေ ရာက်ေ ရာက် စီမံသက်ပ်ွဲ ခ်ျား မငိုပ်နို် ရ် ဒီအတို်ျားဝန်ေ ဆ်ာမှုအဆ် မျာားန် ဆက်ပျြီားသျာားငို့ မရေငာက်ွဲ အေ ခ အေနများ ဖစွာမယ်။ဖောက်သ ည်ေ မ်ာင် ခက်ုထထေ ရာက်ေ ရာက် စီမံသက်ပ်ွဲနိုု့ရာဖောက် ညမျာားရွဲ့အ ပအမပိုံစံမျာား (customer’s behaviour patterns) က်ို ရထျာား ခ်ျားက် ပဓာနက်ပါတယ်။ဖောက်သ ညအ ပ အမ ပိုံစံမျာားက်ဖောက်သ ည်စ်ေ ယ်ာက်န် တစ်ေ ယ်ာက် ချာားနျာားပါငမ် မယ်။
5.ိုပေ့မွဲ မတသျာားဖို့ထိုက်ွဲ “စံ”တခ့န် အေ ခခို်ွဲ အ ပအမဆို်ာပိုံစံတခ့ ရေ နပါတယ်။ဖောက်သ ည်မော်င် ခက် က်ိုအော် မ်ေ အာ်ွုပ်ေ ဆာ်ွဲ ဘယ် အခဖွဲ့အစည်ျားမဆို အက်ျားအ မတ်ရမာပါ။ ဝန်ေ ဆ်ာမှုက်ို အဆ် မ် မ် တစသမတ် ည်ျားေ ပျား ခ်ျားက်ဖောက်သ ည်ွဲ့ ငှုပ် ရျာားရိုက်ခတမှုက်ို အနမ် ဆျိုံားအဆ် မာ ရေ စမာ ဖစပျြီား ငိုပသျာားဝန်မ်ျားအဝ် အသထက်ွ ည်ျား နည်ျားေ စမာ ဖစ်ယ်။
6. က်ိုမ္ပဏီမျာားက်ဖောက်သ ည်ေ မ်ာင် ခက် က် ကြ်ျီားသထျာား ငာေ နတာက်ို အ အမတ် ပ ဖို့ ပယ်က် က် တြ က်တယ်။ ဒါေ့ကြ်ာ်ဖောက်သ ညမျာားဆီမ တို်န်ျားခက်မျာား တျိုားခပျာား ငာပျြီား ဝန်မ်ျားေ သတက် စတဓာတ် က်က်ြရတယ်။ဖောက်သ ည်ဝန်ေ ဆ်ာမှု ထျားခခ န် ခ်ျားက် မေမ်ာင် တွဲအခနမရာ ရရမာယ်ျားက်ို ဝန်ေ ဆ်ာမှုထျားခခ န် ခ်ျားအေနန် ခံဈာားရရတတပါတယ်။ ဝန်ေ ဆ်ာမှု ထျားခခ န် ခ်ျား (service excellence) က်ိုမော်င် ထျာားပျြီာျးာား ဖစ်ေ နရ် ယ်ျားက် “စံ” ဖစွာပျြီားရေ့တျိုားရခယ်က်သျာားေ စပါ တယ်။
7. ဝယ်ယူမှုနည်ျားစဉ်မရာ်ဖောက် ည်ွဲ့ စတေသ ဘာဆို်ာ အ ပအမက်ို ထျာား ခ်ျား ဖ် ဝယ်ယူခ်ျားနည်ျားစဉ် ဖစ် ငာေ အာ် ဘယ်အရာက် စနက်ပျားေ ပျား တယ်။ တစ်ဦျားခ်ျားအေပါ် ဘယ်ွုထျား ချာား လက်ွဲ ပျာားတွဲ ဝန်ေ ဆ်ာမှုများေ ပျားရမယ် ဆိုတာပိုပျြီား နက်နက်ရှို်ျားရှို်ျား ငာနို်ေ စနိုပါတယ်။ ငက်ွီအေရာ်ျား အဝယ် မင်ျားမာေ တာ ဒီက်စ္စက် ငက်သေတ့မက်နိုပါဘျား။ ဘာေ ကြ်ာ် ဆိုေ တာဖောက်သ ညေအရအသတက်မျာား ပျာား ခ်ျားန် စတဓာတေသ ဘာ ဘာဝ အများများလက်ွဲ ပျာား ချာားနျာားေ နငို့ပါ။
8.ိုပေ့မွဲ B2B ဝန်ျားက် များမာဖောက်သ ညေအရအသတက် ပ် မျာားနို်ွဲအသတက် စတေသ ဘာ ဘာဝ က်ို နျာားငည်ျာား ခ်ျားက် ချာားနျာားမှုက်ို ဖစ်ေ စပါငမ် မယ်။ အခဖွဲ့အစည်ျားတစခုက်န် ပိုံမန် ဆက်ဆံေ နတွဲဖောက်သ ည် ဘယ်အများအဈာားထွဲမာ ပါေ န ငွဲဆိုတာ ခ် သတက်ာမာ အက်အညီေ ပျားနိုု့ the Revised Values Table (အတိုေ က်ာက် VALS-2) ဈာာျးိုံား မျာားက်ို တသ တ် မတမရတအတန်ျားအဈာား (၈) များခခွဲ ချာားထျာားပျေားပါတယ်။ ဒီဇယ်ျာားက် ငျိုံားဝပျြီား ပည် စိုံပျြီား ခခ တ်ေ ခ်ာမှုက်ျားတယ်ွု့ မဆိုနို်ေ ပမွဲ အခဖွဲ့အစည်ျားမျာားအေနန် ယ်ျားရွဲ့ဖောက် ညမျာားက် ပ တွဲ “ဉာဉ်” ‘trait’ အေပါ် ဈားစိုက်ွုပ်ေ ဆာ်နိုင်ခ် ရေစပါတယ်။ “ေ အာက်ပါတို့က် VALS-2 ဇယ်ျာားက် ခခွဲ ချာားထျာားေ ပျားတွဲ ဈာာျးိုံား အများအဈာား (၈) များ ဖစပါတယ်။
9. (1)Acualisers ယ်ျားပိုဂ င်ေ သတက် ငဦျားေ ရရွဲ့ ၈ ရာခို်နှုန်ျားေ ငာက် က်ိုယ်ျာား ပတယ်။ ဉ်စ္စာဓန အသြက်ယ်ဝဆျိုံားန် အေအာ် မ်ဆျိုံား ပိုဂ ငမျာား ဖစ်ယ်။ Acualisersသေတက် မျာားောအျာား ဖ် မမက်ိုယ်ုတနျုား ပ်ျာားက်ြတွဲ ဈာာျးိုံား မျာားပွဲ ဖစ်ယ်။ခ်ေကြ်ျားစတွဲ အရ်ျားအ မစမျာားခစာ သြက်ယ်ဝ ပျြီား ငမှုဈီားခပျာားေ ရျား တို်ျားတာမှုစနစ် (socioeconomic scale) မာခောေ ပါက် A1 အဆ် မာ ရေ နသေတ ဖစ်ယ်။
10. (2) Fulfillers တို့က်ယ်ေဘိုယ်အျာား ဖ် အ က် ၃၀ အထက် ရ မျာား ဖစပျြီား အရည် အေသျားန် ပညာဗဟိုတက်ို တနျုားထျာား မျာား ဖစက်ြတယ်။ ငဦျားေ ရ ၁၁ ရာခို်နှုန်ျားက်ိုယ်ျာား ပတယ်။ တို့က် တို့ရွဲ့ ဝယ်ယူမှုေ သတမာ တနျုား (value)န် အရည် အေသျား (quality) က်ိုေ တာ်ျားဆိုတတ်ွဲ ပညာတတ်ေ ငာက် အ မ်မရာငက်ေ သတ့ က် မျာားပွဲ ဖစ်ယ်။
11. (3) Believers ငဦျားေ ရရွဲ့ ၁၆ ရာခို်နှုန်ျားေ ငာက် က် Believers မျာား ဖစက်ြတယ်ွု့ ရ တယ်။ တို့က် အစဉ်အငာတနျုားမျာား အေပါ် အေ ခခံတွဲ ပ်ျားထန်ွဲ ယ်ိုံက်ြည် ခက်မျာားရေ ပမွဲ စည်ျားမဉ်ျားစည်ျားက်မ်ျားကြ်ျီားသေတ၊ရျေားရျိုားခစွဲဝါဒီေ သတ ဖစ်တြ က် တယ်။ Believersသေတက် တို့ရွဲ့ အေတ်ာကြ်ျီားမျာားတွဲ ဝယ်ယူနိုမှုခစမ်ျားပက်ျာား က်ို ရထျာားက်ြတွဲ အတတပညာန် အ က်ေ ခများဝမ်ျားေ က်ာ်ျား ပ မျာား (professionals) ဖစက်ြတယ်။ တို့က် ငမှု ဈီားခပျာားေ ရျားတို်ျားတာမှုစနစမရာ အဆ် B1န် B အသတ်ျားက်ေရာက်နိုပါငမ် မယ်။
12. (4) Achievers တို့က် Believersသေတထက် ငဦျားရေ အနည်ျာ်းယ်ငောက်နည်ျားပါတယ်။ ၁၃ ရာခို်နှုန်ျားေ ငာက် ရတာ ဖစ်ယ်။ တို့က် ဝ်ေ ခ်ေက်ာ်ျား မျာား၊အော် မ် တွဲ က်ေ ခများမှုငိုပငန်ျားရ မျာား ဖစကြ် တယ်။ တို့ရွဲ့ ပ်ုပိုံရပ်ေ သတက် တို့ အသတက် အေရျားကြ်ျီားတယ်။ တို့ရွဲအေ့ာ် မ်မှုအေပ်ါရော် ပနဟပမယ် ထိုတ်ုန် ပစ္စည်ျားမျာားက်ို ပိုမိုန စသက်ြ က်တယ်။
13. (5) Strivers တို့က်မျာားောအျာား ဖ် အ ချာား မျာားရွဲ့ဘောထျာား (opnion)န်ထောက်ခံခက် (approval) အေပါ် အေငျားထျာား မျာားပွဲ ဖစ်ယ်။ ငဦျားေ ရ ရွဲ့ ၁၃ ရာခို်နှုန်ျားေ ငာက်ုက်ိုယ်ျာား ပ တယ်။ တို့က် စတွုက်မာနပါဝယ် တတသူ၊ စတို်က်ေနထိုွုတွဲ ဆန္ဒ ရတတသူမျာား ဖစပျြီား တို့က်ိုယ်ုမရာ မရတွဲ အ ချာားသေတရွဲ့ပိုဆ်ုမှုမျာားန် အ မ်ု က်ျားယ်တတြ က်တယ်။
14. (6) Experiencers တို့က် ငဦျားေ ရရွဲ့ ၁၂ ရာခို်နှုန်ျား ရတယ်။ တို့က် အေသတ့အကြ်ံ မျာားပျြီား တစမူထျား ချာားတွဲ အေသတ့အကြ်ံ များရသေတ ဖစ်ယ်။ တို့က်မျာားောအျာား ဖ်ယ်ယ်ယ်၊ စတအျာားထက်သ နပျြီား စတွုက် မာနပါ ငိုပ်တသူမျာားပွဲ ဖစ်ယ်။ တို့ က် ဘဝအေသတ့အကြ်ံ များစိုံန် စတွှုပ် ရျာား မှုက်ို ရာ မျာား ဖစ်ယ်။ ဈာာျးိုံား မျာား အေနန် တို့က် Achieversန်နောက် ဆျိုံားမာ Believers မျာားအဆ် ထတက် ငမ်ျားနို်ေ ခရတယ်။
15. (7) Makers တို့က် ငိုပ်ေ ဆ်ာခက်ုေ ရျားရှို ငိုပ်ုသူမျာား ဖစပျြီား ဝ်ေ ခ်အဆ် နမ် မျာား ဖစ်ယ်။ ငဦျားေ ရရွဲ့ ၁၃ ရာခို်နှုန်ျားေ ငာက် ရတယ်။ တို့က် မျာားစ ၀န်ျားက်အသတ်ျားနေထိုက်ြပျြီား ရိုပ်ဝတ ပစ္စည်ျားပိုဆ်ုမှုတနျုားက်ို ပနျာားငည် မျာား မဟိုတပါ။ တို့ ဝယ်ယူတာက် ငိုအပမှုေ ကြ်ာ် ဝယ်ာဖစပျြီား ဆန္ဒကြေ်ာ် မဟိုတပါ။
16. (8) Strugglers ဒီငိုများဈာာျးိုံားသေတက် တို့ အက်ြက် အမတ်ံဆပေအပါ် စ္စာစော် မှုရပျြီား တကြ်ျီားတတသူေ သတ ဖစ် တယ်။ ဆို် စဆ်ုမရာပွဲ အစဉ်အဆက် ဝယ်ယူတတြ က်တယ်။ တို့ရွဲ့ဝယ်ယူမှုမာ ခစန့်ဈာားမှုမရတတသ ငို က်ော် က်ာေ နရာမာဝယ်ယူရတာက်ို ဝမ်ျားေ မာက် ဝမ်ျာားရက်ြတယ်။ တိုသေ့တက် ငဦျားေ ရ ရွဲ့ ၁၄ ရာခို်နှုန်ျားက်ို က်ိုယ်ျာား ပတယ်။်ဖောက်သ ညမျာားမာရတွဲ ဒီÓဉ် မျာားက်ို ရထျာား ခ်ျား ဖ် ဝန်ေ ဆ်ာမှု အဆ် က်ို အက်ျား ဖင်စ်န်ျားတွဲ ရငဒမျာား ရရေ အာ်ေ ဆာင်က်ေ ပျားနိုမရာ ဖစ်ယ်။
17.်ဖောက်သ ည်စ်ဦျားက် ထံမ ဘာေ ကြ်ာ် ဝယ်ယူငွဲဆိုတွဲ အခက်ုရာေ ခေဖသတ့ရ ခ်ျားက် ထျားခခ န်ွဲဖောက် ည် ဝန်ေ ဆ်ာမှုေ ပျားရာမာ ပထမခေငမ်ျားပွဲ ဖစ်ယ်။်ဖောက်သ ညမျာား က် အက်ပ်ုခံ ခ်ျားများ(under duress) ဒါမမဟိုတ် အသငနအမ်ျား စတပ်ပန်ျားမှုအောက်မရာ (extreme tension) ဝယ်ယူရတာများ (ပမာအျာား ဖ် -အိုဘအခမ်ျား အနျာားက်စ္စ၊ရေေ့နေရ့ရပ်ျာားရမ်ျား ခ်ျား က်စ္စ) ဆိုရ်ဖောက်သ ည်ွဲ့ စတပ် ပန်ျားမှုက်ိုဖေငာနို်ွဲ အခစမ်ျား တက် အသငနေအရျားကြ်ျီားပါတယ်။
18. စတပ်ပန်ျားမှု က်ို မတျိုားေ စဘွဲ်ဖောက်သ ည်ွဲ့ ထမ်ျားနေရတွဲ ဝန်ုပ်ဝနပျုားက်ိုငောခနိုမယ် ဆိုရ်ကြ်ျီားက်ယ်ွဲဖောက်သ ည် ဝန်ေ ဆ်ာမှုေ ပျားရာေ ရာက်ပါတယ်။ အ ချာားတစုက်မရာ်ဖောက် ည် စတွှုပ် ရျာားစရာမျာားန် ရ်ု စရာမျာားက်ိုရာေ နတာ (ပမာအျာား ဖ် - ခခ် ရက် ရညခရျီားသျာား ခ်ျားန် အနျာားယ် ခ်ျားများ) ဖစပါရ်ဖောက်သ ည်ဝန်ေ ဆ်ာမှုကြ်ျီားပျေားနိုု့ရာ် ယ်ျားေ မ်ာင် ခက် က်ိုက်ေနပမှုရေအာ် ဖည် ဆည်ျားေ ပျားရမာ ဖစ်ယ်။
19. ရယ်ည်ယ်ခက်ဖောက်သ ည် အေနန် ဝန်မ်ျားမျာားန် ဆက်ဆံရတာကေ်ာ်ျားတယ်ဆုတွဲ အေသတ့အကြ်ံ များရရ သျာားေ စဖို့ပွဲ ဖစ်ယ်။ အခဖွဲ့အစည်ျားအေနန် က် ဝန်မ်ျားမျာားရွဲ့ စတေသ ဘာ နျာားငညမှုအဆ် က်ို မှ် တ်ေ ပျားရမာ ဖစ်ယ်
20. Question & Answer • Thanks You